October 2020 | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara 1985 keessa sirna federaalizimii biyyattii keessatti hojiirra oole hordofuun kan hundaa’eedha. Manni Murtichaa hundeeffama isaa irraa kaasee Caffee Araaraa (6 Kiiloo)tti kan argamu gamoo suura 2ffaa irratti mul’atu keessatti tajaajila abbaa seerummaa kennaa turee jira; hojii bulchiinsaas achuma keessatti gaggeessaa tureera. Gamoon kun turtii yeroo dheeraa irraan ka’e dulloomuun jaaree […]
Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Yaa’ii Idilee isaa 188ffaa gaafa guyyaa 07-02-2013 gaggeesseen Muudama Gargaartotta Abbootii Seeraa Manneen Murtii Aanalee leenjifamtoota leenjii hojiin duraa ILQSO marsaa 13ffaa erga raawwatee booda bu’uura Dambii Bulchiinsa Abbootii Seeraa (BASO) Lakk.7/2012 keewwata 36 tiin akkaataa armaan gadiin ramaddii isaanii raawwatee jira. Akkaatuma kanaan Gargaartotni Abbootii Seeraa muudamnii fi ramaddiin […]
BAAJATA MANNEEN MURTII OROMIYAA BARA 2013
Bara 2013 Manneen Murtii Oromiyaatiif baajatni biiliyoona 2 ol ramadameera. Haaluma kanaan: Baasii namoomaa (mindaa fi faayidaa adda addaa)’f sadarkaa naannoo Qr. 326,411,589 Hojii adeemsisaa idileef Qr. 86,334,995 Baajata waliigalaa baasii marmaartuu Naannoof (MMWO fi MMO 22) Qr. 412,746,584 Baasii Kaappitaalaa ijaarsa pirojektootaaf (MMWO fi MMO 2) Qr. 378,253,688 Waliigala baajata Naannoo (MMWO fi MMO […]